Wholesale BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (Yakakwira slump yekuchengetedza mhando) fekitori uye vagadziri | Gaoqiang
BT-302 Polycarboxylate superplasticizer 40% (Yakakwira slump yekuchengetedza mhando)
BT-302 chizvarwa chitsva chekukurumidza-kusunungura uye kutsvedza kunochengeta amai hwahwa hwakagadzirwa kubva TPEG nekumahara kwakanyanya kupolimisa, uye neboka idzva rakaburitswa-rakaburitswa rinounzwa mukutanga.
BT-302 chizvarwa chitsva chekukurumidza-kusunungura uye kutsvedza kunochengeta amai doro rinogadzirwa kubva TPEG nekumahara radical polymerization, uye idzva rakatsiga-rakaburitswa-rakaburitswa boka rinounzwa mune yekutanga synthesis. Pasi pemamiriro ealkaline ekongiri, iro rinononoka-kuburitsa boka mune mamorekuru chimiro chechigadzirwa ichi rinogona kusunungura zvishoma nezvishoma boka riine basa rakapararira, richiita basa rekuenderera mberi nekuparadzira simende, kuti riite basa rekudzivirira iyo kongiri yekudonha kurasikirwa Iyo ine yakaderera yekudzikisira mvura chiyero, asi ine yakanyanya yakanyanya slump dziviriro performance.Generally inoshandiswa nemvura ichideredza amai doro JS-101B uye JS-101A, nezvimwewo, Inonyanya kushandiswa mune yakasimba-simba kongiri ine yakakwira zvinodikanwa kune slump. dziviriro mashandiro, uye zvigadzirwa zvaro zvinoshandiswa zvakanyanya mukupomba kongiri, super-kuyerera -kuzvimanikidza uye yakasimba-yakasimba yakakwira-kuita kongiri uye yekutengesa kongiri yeiyo yepamhanyisa njanji njanji, Expressway, hydro-simba uye mamwe makuru mapurojekiti einjiniya.
1.Iye anononoka-kuburitsa amai doro rakakurumidza kuburitsa kupfuura iro reBT-303 amai doro. Nguva yekuburitsa inowanzo kuve mushure me30min (zvinoenderana nezvinhu izvo nguva yekuburitsa mutsauko)
2.With yakakwira yakakwenenzvera kuita, inogona kurega iyo kongiri idonhe 2h pasina kurasikirwa
3.Low yekudzikisa mvura chiyero haiwanzoshandiswa yega, inoda kusanganiswa nemhando yekudzikisa mvura rudzi amai doro
4.With yakaderera viscosity uye thixotropy, inokodzera kongiri ine yakaderera mvura simende ratio
Chitarisiko yakajeka yeyero mvura
Kuwandisa (g * cm3) 1.02-1.05
PH Kukosha 6-8
Zviri Mukati 39%±1
simende fluidity mm ( 270mm / Hr
Mvura yekudzikisa Rate 5%
kubuda kweropa rate 0%
Kumanikidza kubuda ropa mwero 30%
Zvemukati Mhepo 3%
Slump chengetedzo mm (30min) 200mm
Slump chengetedzo mm (60min) 170mm
3D Compressive simba reshiyo 190MPa
7D Kumanikidza simba reshiyo 170MPa
28D Kumanikidza simba reshiyo 150Mpa
1.Applicable kune kumisikidza kwekutanga simba kongiri, yakadzora kongiri, precast kongiri, kukanda-mu-nzvimbo kongiri, kuyerera kongiri, yekuzvibata-compacting kongiri, mizhinji kongiri, yepamusoro-kuita kongiri uye yakajeka kongiri, ese marudzi emaindasitiri uye ehurumende zvivakwa. mune premix kukanda-mu-nzvimbo kongiri, kunyanya kune yakaderera-giredhi yekutengesa kongiri.
Inogona kushandiswa zvakanyanya mumigwagwa yepamusoro-soro, simba renyukireya, kuchengetedza mvura uye mapurojekiti emagetsi emagetsi, nzira dzepasi pevhu, mazambuko mahombe, nzira dzekuratidzira, zviteshi zvengarava uye zvikepe uye mamwe mapurojekiti akakura enyika.
3.Applicable kune ese marudzi eindasitiri uye ehurumende kuvaka uye yekutengesa kongiri yekusanganisa zviteshi.
1.This chigadzirwa hachina ruvara kana chakajeka yero mvura. Chipimo chemushonga:Kazhinji ，shandisa 0-20% amai doro nekudzora mvura amai doro, uye sanganisa zvimwe zvidiki zvinhu kugadzira mvura yekudzikisa mumiririri. Muyero wemumvura-unodzora mumiririri unowanzo kuve 1% ~ 3% yehuremu hwese hwekusimbisa zvinhu.
2.Usati washandisa chigadzirwa ichi kana kushandura mhando uye batch yesimendi uye mavhu, zvakakosha kuita bvunzo yekuchinja nesimende uye nejecha. Zvinoenderana nemuyedzo, gadzira chikamu chemvura inoderedza mumiririri.
Ichi chigadzirwa chinogona kushandiswa chisina kuroorwa (Kazhinji hachikwanise kushandisa mune imwe chete) Inogona kusanganiswa nemvura-inoderedza amai doro uye kumisikidza kudzora mai doro kudzikisa kongiri yekudonha kurasikirwa. Kana komputa ine anoshanda anobatsira kuti uwane zvinongedzo zvine retarder / simba rekutanga / antifreeze / kupomba mabasa. Maitiro ekushandisa uye mamiriro anofanira kusarudzwa nekuyedza uye kusanganisa tekinoroji
4.This chigadzirwa chinogona kushandiswa pamwe nemamwe marudzi eanopikiswa senge yekutanga simba mumiririri, mweya entrainment mumiriri, retarder, nezvimwewo, uye inofanirwa kuyedzwa isati yashandiswa. Usasanganise naphthalene akateedzana mvura yekudzora.
5.Concrete simenti uye musanganiswa reshiyo inofanirwa kutemerwa bvunzo, Kana uchishandisa, yakavhenganiswa uye kuyerwa mvura inofanirwa kuwedzerwa kana kuwedzerwa kune yekongiri musanganisi panguva imwe chete. Usati washandisa, muyedzo wekusanganisa unofanirwa kuitwa kuti uve nechokwadi chekongiri
6.Kana paine zvinoshanda zvinonamatira senge nhunzi dota uye slag muchiyero chekongiri, huwandu hwemvura-hunodzora mumiririri hunofanirwa kuverengerwa sehuwandu hwese hwekusimbisa zvinhu.
Pasuru: 220kgs / dhiramu, 24.5 matani / Flexitank, 1000kg / IBC kana pakukumbira
Kuchengeta: Yakachengetwa mudura rakaomeswa yekuchengetera ye 2-35℃ uye yakarongedzwa yakasimba, isina kuvharwa, hupenyu hwesherufu igore rimwe. Dzivirira kubva kuzuva rakananga uye nechando
Ruzivo rwakadzama nezvekuchengetedza, ndapota tarisa Chinyorwa Chengetedzo Dhata Sheet.
Pashure: JS-104 Compound polycarboxylate Superplasticizer 37.5% (Mvura inoderedza mhando)
Zvadaro: BT-303 Polycarboxylate Superplasticizer 40% (Super inononoka kuburitsa slump yekuchengetedza mhando)
Kupinda Kwemhepo Mhando Polycarboxylate Superplasticizer
Kuomesa Kuwedzeredza Rudzi Polycarboxylate Superplasticizer
Set Kuteterera Rudzi Polycarboxylate Superplasticizer